Namoaka boky nalaina avy amin’ny tantara nentim-paharazana notantarain’ny zokiolona Tének ilay nahazo vatsy ara-bola avy amin’ny Rising Voices · Global Voices teny Malagasy
Haseho amin'ny 29 Oktobra 2020 ny momba ilay boky
Voadika ny 22 Oktobra 2020 3:30 GMT
Luis Flores miaraka amin'ny boky “In tsalpadh t'ilab i mam” tany Meksika ny volana Febroary 2020. Saripikan'i E.Avila.
Tamin'ny taona 2015 ny Rising Voices nanolotra vatsy bitika ho an'i Luis Flores, tovolahy Tének (fantatra koa amin'ny anarana hoe Huastec) avy ao amin'ny vondrom-piarahamonina Isidro, Tampaxal, ao amin'ny Fanjakana San Luis Potosí any Meksika. Niasa mafy izy tamin'ny fameloman'aina indray ny fitenindrazany tamin'ny alàlan'ny fanentanana tao amin'ny tambajotra sosialy ary izy no mpanorina ny tetikasa Lenguas Web.
Nanolo-kevitra ny hanampy amin'ny fameloman'aina indray ny fiteny amin'ny alàlan'ny fampandraisana anjara ny ankizy avy amin'ny sekoly eo an-toerana hanangona tantara any amin'ireo zokiolona ao amin'ny vondrom-piarahamonina ny tetikasany. Noraketina sy nangonina ho andian-dahatsary ary nalefa tao amin'ny fantsona YouTube ireo tantara nentim-paharazana ireo ka nanjary loharanon'ny boky an-jotra mitondra ny lohateny hoe “In tsalpadh t'ilab i mam” miaraka amin'ny sary nataon'ny mpanakanto iray avy eo an-toerana. Faly izahay fa afaka nanohana an'ity tetikasa ity ny Rising Voices satria avy amin'ny vondrom-piarahamonina mivantana izany izay manasongadina fa ilaina ny fitahirizana ireo tantara nentim-paharazana ho fomba iray hampitana io fahalalana io ho an'ny taranaka tanora. Nomena dika mitovy amin'ilay boky aho rehefa nihaona tamin'i Luis tany amin'ny fihaonambe tamin'ny fiandohan'ny taona 2020 tany Mexico.
Fonony ambadiky ny boky “In tsalpadh t’ilab i mam” miaraka amin'ny sary famantarana ny Rising Voices. Saripikan'i E. Avila
Efa ho dimy taona taty aoriana, navoaka ny boky noho ny fanohanan'ny Ivontoeram-pikarohana sy Fianarana Ambony any Meksika (CIESAS araka ny fanafohezanteny espaniola) mba haparitaka amin'ireo sekoly eo an-toerana. Havoaka amin'ny fomba ofisialy mandritra ny Fetibe Virtoalin'ny Fitenin'ny Indizeny Nasionaly (FLIN ho an'ny fanafohezanteny espaniôla) ilay boky ka ny Rising Voice no mpiara-miasa amin'izany ary ny Ivontoerana Nasionaly ho an'ny Fitenin'ny Indizeny (INALI ho an'ny fanafohezana amin'ny teny espaniôla) no mikarakara. Miangavy anao hanaraka anay ao amin'ny pejy Facebook-n'ny INALI amin'ny 29 Oktobra amin'ny 22:00 ora UTC raha te hahalala bebe kokoa momba ity tetikasan'ny boky ity ianao.